Kunzima ukuthola wethu iplanethi ezemidlalo umdlalo ngabe ncintisana udumo football sika. Njengoba omunye umdlalo kufinyeleleke kakhulu kuzo zonke izizinda zokuphila, kuyathakazelisa abantu kude mncintiswano, futhi abalandeli kunoma iyiphi ezingeni. Noma kunjalo, phezulu ubuqhawe kukhona ngezinga elingelikhulu kwamaplanethi - umcimbi main ezenzeka njalo ngemva kweminyaka emine. Okwamanje, umlando football of the Championship emhlabeni uye wachitha 20 tournaments.
Kukhethwa nendawo ubuqhawe yezwe yokuqala ngo-football esivuna Uruguay wayengekho ngephutha. Leli qembu unqobile zokugcina tournaments ezimbili zakwamanye amazwe e-Olympic Games, futhi ngenxa yosizo lwakhe emandleni South America waklonyeliswa ilungelo ukusingatha imincintiswano international. Kwathi ngo-1930, lapho-World Cup owawuse kanye ngqa emlandweni. Ibhola ke wayemiselwe ukuba ukunqoba izinhliziyo zabantu emhlabeni wonke. 13 amazwe iqhaza babhaliswa ngokubamba iqhaza. Ikhaya Stadium Montevideo kwaba for the team Uruguay kazwelonke kunjengegolide ngempela. Lokho ku-ke iqembu ikhaya iwine ngq indondo yegolide ubuqhawe.
World Cup Soccer: Umlando zokunqoba
Ngo tournaments esizayo emhlabeni aphethwe nge njalo ezithile - eyodwa njalo ngemva kweminyaka emine. Ukuxolela kwakungamadodana forties, lapho ngenxa seMpi yoMhlaba yesiBili, izenzakalo ezimbili akhishiwe.
World Championship, aphethwe e-Italy, has abalandeli uyajabula kohlelo olusha. Abahleli besele bafake okubizwa ngokuthi uhlelo-Olympic lapho isiphukuphuku siqedwa kusukela emzabalazweni. Nakulokhu futhi, elalinamandla ukuwedlula kwakungamadodana Sebawoti, kulokhu iqembu Italy.
Ngemva kwempi, ubuqhawe lezinyawo emhlabeni waqala 1950. Eyokuqala ubuqhawe post-yimpi waphathiswa ukuziphatha umfelandawonye Brazilian. abalandeli Local angalindela ngokunqoba abadlali bakhe. Isikimu we imidlalo mqhudelwano kwaphinde kushintshwe okuthile kulo bese manje quartet yokugcina yembula eziqine round robin. Ngaphambi umdlalo wokugcina Brazilian eqenjini lesizwe aneliseke draw, kodwa ihluleke Uruguayans zabo zababa imbangi ne score 1-2 futhi baba kuphela yesibili. Isikhathi "pentakampiony" Uzokuza eminyakeni embalwa, futhi ngaleso sikhathi lonke leli zwe wangena shí ukulila.
Inkathi Brazilian iqembu lesizwe
I wesithupha iminyaka ilandelana ngesikhathi seNdebe yoMhlaba, owawusedolobheni ukuthi amasimu asemhlophe Swedish, kwasho hegemony football Brazilian iminyaka eminingi eminingi. ESweden, leli qembu ekhanda lwakhe lwaluqinile kunezibopho abaphikisi babo. Kungani kuphela imiphumela okufanayo owamanqamu futhi esingujuqu. Bobabili imidlalo yaphela ngescore esifanayo 5-2 esivuna Brazil.
Ngo-1962 e-World Championships, aphethwe eChile, umlando kwaphinda kwenzeka ngezindlela eziningi. the steamroller ithimba Brazilian Kwaphinda sihamba izimbangi zalo ngokunikeza iphuzu elilodwa kuphela esigabeni iqembu iqembu yeCzechoslovakia. Amathuba ukuze baziphindiselele abaphikisi wawela baseBrazil umdlalo wokugcina. Futhi kulesi sikhathi, "yellow" babenamandla nge isikolo 3-1.
Kodwa ngesikhathi ubuqhawe emhlabeni ngo-1966 iqembu Brazilian eyasehlula esigabeni iqembu. Ngo ukungakhethi, kuyafaneleka ukuthi lokhu wayenezizathu yayo. Ukulahleka abadlali eziningana ehola, kuhlanganise Pele zathiya bezikhali amageyimu yezanuseb ibhola. Futhi won ubuqhawe wabanikazi bayo, abadlali England ukushaya umdlalo wokugcina we ithimba German kazwelonke kanye isikolo 4-2. Ngesikhathi amaphayona football lokhu kunqoba uzohlala kuphela ngalolu suku.
Kodwa ngemva kweminyaka emine e-Mexican World Cup baseBrazil baphinde isihloko amaqembu esiqine kunazo iplanethi. Ngalesi sikhathi, iqembu South America unqobile imidlalo eyisithupha aphume eziyisithupha, nge umehluko ingqikithi imigomo amaphuzu futhi yavuma 19-7. Umdlalo wokugcina wokuhlasela amaNtaliyane wathatha inzuzo enkulu Brazilian eqenjini lesizwe futhi saphela ngokukhululwa ukunqotshwa 4-1. Nalapha futhi, umhlaba wonke babewahlonipha play Pele okukhulu.
Inkathi football Imininingwane
Njengoba isikhathi sasiqhubeka, washintsha emhlabeni, washintsha futhi lo mdlalo main. Abaqeqeshi ngokwethukela ukusebenzisa amaqhinga yomdlalo, futhi lase liqala ukuthela izithelo. Waboshwa ngo-1974 e-Germany i-World Cup, umlando imiphumela eyabonisa ukuthi kubaluleke izisebenzi coaching, bamangale. Ithimba German eholwa Helmut Schoen ngokunqoba aphethwe kulo mqhudelwano ekhaya, ngokuwina igolide yesibili emlandweni walo.
Esikhathini esizayo, winner iyona amaqembu ehlukene. Kodwa umlando we-FIFA World Cup ngenxa baseBrazil wathatha endaweni yayo. Ngiphakathi omunye wabo ayikwazanga ukuphinda ekuzuzweni kwemiPhumela amaqembu aseNingizimu Melika, inqotshwe tournaments ezimbili zilandelana.
Njalo World Cup - Indaba ngokuwina, indaba ubuntu, umdlalo wakhe iwine izigidi abalandeli. Ngesikhathi imincintiswano zangaphambi empini kwakungu izinkanyezi main Stabille, Meazza, UFrantišek plánička, Piolla - amagama, khuluma abalandeli kancane samanje mdlalo, kodwa ngenkathi yangaphambili abadlali yisakhiwo sodumo emazweni abo.
Eminyakeni yangemva kwempi kuqhame amaBrazilians nge kusakazeka izinkanyezi, eyisikhulu phakathi okwakukhona Pele, ezintathu-isikhathi iqhawe emhlabeni in the Brazilian eqenjini lesizwe. Naye phezu izinkundla ibhola kukhanye Dida, Garrincha nezinye football wizadi. Le nkathi wabe esenikeza izwe nenani ezifana Beckenbauer, Kempes, Rossi, Boniek.
Championship 1986 lwaluwushintsho emlandweni football ngamazwe. Akukhona kuphela ukuthi Argentina eqenjini lesizwe okwesibili baba iqembu elinamandla kuleli zwe, baba kumiswa lomcoka isimo inkanyezi Diego Maradona, okwenzeka kwi izimangaliso mqhudelwano. Mhlawumbe, ngemva Pele kwaba umdlali wokuqala lubalwa okusezingeni eliphezulu.
Kahn, Ronaldo, Batistuta, Zidane, Klose - zonke fan ibhola ungaqhubeka kulolu hlu, kuye izintandokazi zabo.
Ithimba Russia (USSR) empambanweni Championships emhlabeni
Ukubamba iqhaza lokuqala abadlali bethu umncintiswano omkhulu kunayo yonke emhlabeni ebibanjelwe lesithupha World Championship e-Sweden. Aseqala kuphumelele ngempela. abasubathi Russian balibangisa phakathi amaqembu engcono eziyisishiyagalombili emhlabeni, ukulahlekelwa ku-quarter zezimpi kanye isikolo 0-2. Ngemva kweminyaka emine, umphumela kwaba okufanayo: isikhathi sokuhamba at the stage of the ¼ owamanqamu. Nalapha isithiyo kwaba iqembu zezimpi ubuqhawe, leli thimba eChile.
I yimpumelelo kakhulu emlandweni football yasekhaya isibe World Cup e-England, lapho ithimba lethu ifinyelele Semifinals. Esikhathini esizayo, kulawo Imiphumela dream kuphela.
Russia ngesikhathi seNdebe yoMhlaba - indaba Kuyadumaza. Ithimba lakhe inkulumo waqala ngo-1994. Isiyenziwe yaphakama owalandela zomthetho kweSoviet Union, iqembu Russian kwenziwa kathathu ngesikhathi Championships emhlabeni. Ngeshwa, zonke ezintathu kule midlalo seziqedile kakade esigabeni iqembu. Ake bathemba ukuthi Indebe Yomhlaba 2018, okuyinto izobanjelwa endaweni yakithi uzobangenisa abasubathi izizathu yokuziqhenya.
FIFA World Cup: Umlando kanye Izibalo
Njengoba wazi, zonke ezemidlalo zidinga izibalo njalo izinkomba ezahlukene. Uma sicabangela luyingxenye izinombolo, ungabona izibalo ezilandelayo: okwamanje football umlando Championships zwe 20 kule midlalo, kodwa amaqembu 8 kuphela waba umnikazi we umklomelo main.
Inombolo enkulu ngokunqoba i-Brazilian eqenjini lesizwe - 5, eduze ke kukhona amaqembu esizwe ka eJalimane nase-Italy, ukuba bakwazi ukubolekwa izimali zalo onqobayo ezine. I scorer engcono emlandweni Championships izwe Umgadli German Miroslav Klose. Ngo asebenzayo 16 imigomo yayo kukora. Inombolo enkulu zokunqoba siqu Pele kwempahla ukuthi kathathu iqhawe emhlabeni njengengxenye ithimba Brazilian. Ukubonakala Iningi ochungechungeni yokugcina Championships owawuseHonolulu footballer German Elisabeth Matthäus.
FIFA World Cup 2018: Ukulindela
Umlando we-FIFA World Cup iyaqhubeka kumbiko wakhe. Futhi izwe ubuqhawe esilandelayo, oyokuba eRussia, sigcwalisa indaba namaqiniso amasha. Lokhu mqhudelwano uthembisa ukuba ezithakazelisayo, bezijabulisa okuthakazelisayo. It nakanjani zikhanyise izinkanyezi ezintsha kanye abasubathi lizofiliza, eyaziwa emhlabeni wonke.
Imini nobusuku - incazelo kumnandi of zemvelo
Biography Christina Asmus - actress abasha ethembisa